ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “လက်ဆောင်”
Good Day Ko Paw,
Here is my gift.
ကိုပေါရဲ့ အတွေးအခှေါနဲ့ နီးစပ်တဲ့ ဖတ်ရှုမှတ်သားသင့်တဲ့ မခင်မမမျိုးရဲ့ ဆောင်းပါးကို ဖတ်ကြည့်စေချင်တယ်။
လူကြီးဆိုရင် ရိုသေရမယ်။လေးစားရမယ်။ ကန်တော့ရမယ်ဆိုတဲ့ အသိတွေနဲ့ခေါက်ရိုးကျိုးလာတဲ့ ကျနှောတို့ဓလေ့ထုံးစံတွေနောက်ကွယ်မှာ သူများနိုင်ငံက စံနစ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ထင်သာမြင်သာမရှိသော corruption အပျော့စားကို ယဉ်ကျေးမှုအရကိုအားပေးနေတဲ့သဘောမျိုးသက်ရောက်နေတယ် ဆိုတာကို မီးမောင်းထိုးပြထားတဲ့ ဆောင်းပါးပါ။
အကိုပေါ လက်ဆောင်လာပေးပါတယ်။ ပျော်ရွှင်စရာ ပိတ်ရက်တွေ များများရပါစေ မိသားစုနဲ့ ပျော်ရွှင်စွာ ခရီးသွားနိုင်ပါစေ အချိန်ပေးနိုင်ပါစေး)
I love reading your post and it remind me my younger days at school, home town and our traditional practice or culture.
But I was notaလူရည်ချွန်. :)
Hi Ko Paw, don't you reply the comments meant to you? nothing special just want to know.